Site na: KongoLisolona: April 5, 2020 00: 30
Pastọ Ngoy Mulunda!
Ọ dị mfe ịgha ụgha karịa ikwu eziokwu.
Ọ dị mfe inyefe karịa ikwesị ntụkwasị obi.
Ọ dị mfe ịgba ọsọ karịa iru ya.
Ọ dị mfe ichefu karịa ime ihe.
Fọdụ ahọrọwo ụzọ dị mfe ma ndị ọzọ aghọtala na a na-enwe obi ụtọ na nsogbu!
Ndu nke ụgbọ elu Cuban bu ndị dọkịta Cuban bịara ịzọpụta Italytali; nke ọrịa nje Corona bibiri: ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara nke ndị dọkịta ya bụ ndị isi ojii nabatara na ọnọdụ "High Stand" site n'aka ndị ọcha na-emekpa ndị isi ojii bi na ...tali ... (VIDEO)
Ọkt29 03: 54